Dowladda Soomaaliya oo is bedel ku sameyneyso Maamulka Gobolka Hiiraan – idalenews.com
Dowladda Soomaaliya oo is bedel ku sameyneyso Maamulka Gobolka Hiiraan
Dowadda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday inay is bedel ku sameyneyso Maamulka Gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyn, kadib codsi ka yimid dadka deegaanka.
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed oo booqasho saddex cisho ku tagay magaalada Beledweyn ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in is bedel lagu sameeyo maamulka Gobolka Hiiraan iyo kan degmada Beledweyn.
“Mudadii 3-cisho ee aan ku sugneyn Beledweyn waxaa qabanay howlo aad u tira badan, waxaan u nimid inaan u kuur galno xaaladaha nabadgelyada siyaasada iyo inaan daraasad ku sameyno sida ugu haboon in maamul KMG u sameyno”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha gudaha oo la hadlay Idaacada VOA.
Wasiirka ayaa sheegay inay arkeen dareenka dadka, isla markaana ay soo dhoweeyeen wanaaga iyo waxqabadka uu sameeyay maamulka gobolka.
“Waxaa la kulanay dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada, dhamaan waxaa isla garanay in lagama maarmaan tahay in maamul loo dhiso, dadka deegaanka dareenkooda wuxuu ahaa in is bedel uu yimaado”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha gudaha.
Mr Guuleed ayaa sheegay in is bedelka lagu sameynayo maamulka Gobolka uu qeyb ka yahay is bedelada ay ku sameynayaan maamulada kale ee gobolada dalka, isagoo xusay inay la tashi ka sameynayaan magaalada Muqdisho.
Wasiirka arrimaha gudaha ayaa ku amaanay Maamulka Gobolka Hiiraan iyo Ciidamada AMISOM ee Jabuuti ka socda dadaalka ay sameeyeen, isla markaana is bedel la taaban karo uu ka jiro magaalada Beledweyn.
Dhinaca kale Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka ayaa Muqdisho waxaa u soo raacay Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan C/fataax Xasan Afrax, iyadoo madaxda dowladda ay kala hadli doonaan sidii uu ugu qanci lahaa inuu ogolaado xil wareejinta.
Madaxweyne Axmedinajaad oo indhaha looga dhuftay kabo
Madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in xiriirka diblomaasiyadeed ee Caalamka uu soo dhismayo